Cheap Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwe igwe na-enye igwe na ụlọ ọrụ | YiZheng
Na Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe bụ ọgbọ ọhụrụ nke agwakọta akụrụngwa nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara. Ngwaahịa a bụ ngwa agwakọta ọhụrụ nke nwere ike ịghọta ọrụ na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu na-eri nri ma na-ewepu ya. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị na usoro ịmịkọrọ ọtụtụ ahịhịa na-emepụta fatịlaịza na usoro mmepụta fatịlaịza granular.
Gịnị bụ Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwe igwe?
Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe bụ oru oma inggwakọta akụrụngwa, ogologo isi tank, mma inggwakọta mmetụta. Isi akụrụngwa na ndị ọzọ inyeaka ihe na-nri n'ime akụrụngwa n'otu oge na-agwakọta uniformly, na mgbe ahụ na-ebu ya site belt ebu ka granulation usoro maka granulation. Na Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe adopts akwụkwọ rotor Ọdịdị azọpịa nnukwu ihe mgbe edemede, ka nweta nzube nke ọzọ edo inggwakọta. Igwe ahụ nwere kọmpat, ezigbo akara, ọdịdị mara mma ma na-arụ ọrụ na mmezi.
Gini ka eji eji ihe eji eme nri abuo?
E nwere ahịhịa atọ dị iche iche na-agagharị agagharị na isi nke Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe, na ahịrị nke helical nwere mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe. Ngwunye pulp ahụ ga-atụgharị ihe ahụ n'akụkụ axial na radial mgbasa na ụfọdụ Angle, nke mere na ihe ahụ nwere ike ịbụ ngwa ngwa na evenly agwakọta. A na-enye ntinye ntinye nke igwe ahụ na uzuzu uzuzu, nke nwere ike igbochi ọgbọ nke ikuku mmiri. Oghere kọntaktị dị n'etiti agụba pulp dị na kọntaktị zuru ezu na ihe ahụ iji mee ka ịgwakọta ahụ ọbụna. NaUgboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe nwedịrị ike ịmịcha ihe ntụ ntụ mgbe ọ na-akpali ya. Nkọwa nke ihe mmiri ahụ abụghị ntụ ntụ ma ọ bụ mmiri na-agbapụta. Igwe mmiri na-akpali akpali na-atọ ntọala maka usoro iga na usoro nhazi ọzọ.
Iji Ugboro abụọ igwe nri igwe nri igwe nri
Na Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota igwe adabara maka inggwakọta ihe karịrị abụọ iche iche nke fatịlaịza, mmako premixes, onyinye ndepụta, ndọpụ ndepụta, mmako premix ndepụta, wdg
Uru nke Ugboro abụọ aro fatịlaịza igwe
(1) Omume kwụsiri ike.
(2) Nnukwu ikike ịkpali.
(3) Na-aga n'ihu mmepụta.
(4) Mbelata mkpọtụ.
(5) Dị mfe maka nrụnye na ndozi.
Ugboro abụọ aro Fatịlaịza igwekota Machine Video Display
Nhọrọ Ugboro abụọ Ise Fatịlaịza igwekota igwe
Nke gara aga: Ahịhịa & Wood Crusher
Osote: Kwụ fatịlaịza igwekota